मुख्य समाचार – Page7– JanaSanchar.com
बाल संगठन प्रमुख डंगोल पुर्पक्षका लागि थुनामा
बालबालिका तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल बाल संगठनका प्रमुख बालकृष्ण डंगोललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । डंगोलसँगको मिलेमतोमा १२ दिनको शिशु लैजान खोज्ने बेलायती महिला डोना स्मिथलाई पनि थुनामा पठाइएको छ । उनीहरुलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी स्टाफ नर्स निर्मला गुरुङलाई भने ४ लाख रुपैयाँ..
अन्तराष्ट्रिय एलम्नस अवार्ड २०१९ यस पटक कास्कीको मादी गाउपालिका सिक्लेसका संरक्षणविद् डा. हुमबहादुर गुरुङले प्राप्त गरेका छन । उनी यो अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । संरक्षण क्षेत्रमामा डा. गुरुङले गरेको योगदानको आधारमा अष्ट्रेलियाको गि्रफिट विश्वविद्यालयले यस अवार्डबाट सम्मान गरेका थियो । डा गुरुङले सहभागितामुलक..
काठमाडौको माछापोखरीबाट प्रहरीले पेस्तोल सहित ७ जनालाई समातेको छ । काठमाडौ प्रहरी परिसर टेकुले चलाएको विशेष अपरेसनमा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएपनि उनीहरुको परिचय, पेस्तोल के का लागि बोकिएको खुल्न आएको छैन..
पत्रकार ओम हमाललाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
कास्कीका क्रियाशील पत्रकार ओम हमाललाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतकै गेटबाट प्रहरी प्रशासनले पत्रकार हमाललाई अमानवीय रुपमा पक्राउ गरि अभद्र व्यवहार गरेको भनि झुट्ठा मुद्धा लगाएको थियो । पत्रकार ओम हमालका तर्फबाट श्रीमती मोनिका गुरुङले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । रिट उपर इजलास गरी माननीय..
कृषि मन्त्री खनाललाई डेंगु
नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई डेंगु देखिएको छ । मन्त्री खनाललाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने समस्या देखापरेपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रगत परीक्षण गरिएको थियो । परिक्षणमा उहालाई डेंगु भएको पुष्टि भएपछि ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाइएको छ..
पत्रकार हमाललाई प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै झुट्टा मुद्दा,७ दिनको म्याद थप गरि हिरासतमा
पत्रकार ओम हमाललाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौमा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै झुट्टा मुद्धा लगाईएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स-सम्मान रिहाई भएका हमाललाई पुन पक्राउ गरी काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालबाट ७ दिनको म्याद थपिएको छ । उनलाई प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको गेट बाट आदेशको वास्तै नगरी अमानवीय तरिकाले..
कमल पौडेल अथक । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले महासंघका साधारण सदस्य एवं जनसंञ्चार डटकमका सम्पादक ओम हमालको रिहाइको माग गर्दै बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको गेटमा आधा घण्टा धर्ना दिएको छ । विहान ११ बजेदेखि सुरु भएको धर्ना साढे ११ वजे सकिएको थियो । धर्नामा सहभागी पत्रकारहरुले पत्रकार ओम हमालको तुरुन्त रिहाइको माग गरेका थिए ।..
गरिब दुखी आवाज विहीनको आवाज उठाएर आफ्नो धर्म निभाउछ पत्रकार । अनि पुरस्कार दिन्छ सरकार हतकडी । वा वा
भिडियो हेरे शरीरमा काडा उर्मियो रगत तातेर आयो । आखाबाट आशु बग्यो । एक श्रमजिवीपत्रकार यसरी सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरिन्छ । यो भन्दा उदाक केही होला ? धकेलेर,धिच्चाएर, तानेर कोच्छ प्रहरी भ्यानमा कि ठुलै अपराध गर्‍यो कि ? कमसे कम सामान्य तवरले पनि पत्राउ पर्न सकिदैन र ? के ज्याजती नै देखाउन पर्छ ? हैन एक कलमजिवी पत्रकारसंग किन..